Ndị na-emepụta ngwaahịa na ndị na - ebubata ya - China Main Products Factory
Thrie doo guardrail
Nchebe ahụ bụ isi iji soro AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 na ụkpụrụ EN1317. Ihe maka nke ahụ bụ Q235B (S235Jr mkpụrụ ike karịrị 235Mpa) na Q345B (S355Jr mkpụrụ ike karịrị 345Mpa). N'ihi ọkpụrụkpụ nke guardrail tumadi site 2.67mm ka 4.0mm. Elu ọgwụgwọ na-ekpo ọkụ tinye galvanized, na-eso AASHTO M232 na hà ọkọlọtọ dị ka AASHTO M111, EN1461 wdg The guardrail mere maka kewaa okporo ụzọ n'ime ...
Nchebe ahụ bụ isi iji soro AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 na ụkpụrụ EN1317. Ihe maka nke ahụ bụ Q235B (S235Jr mkpụrụ ike karịrị 235Mpa) na Q345B (S355Jr mkpụrụ ike karịrị 345Mpa). N'ihi ọkpụrụkpụ nke guardrail tumadi site 2.67mm ka 4.0mm. Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ịgbaso AASHTO M232 na ụkpụrụ nha anya dịka AASHTO M111, EN1461 wdg. Nche nche nke emere maka kewaa okporo ụzọ na ...
Nkwụsị njedebe bụ isi ịgbaso AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 na ọkọlọtọ EN1317. Ihe maka nke ahụ bụ Q235B (S235Jr mkpụrụ ike karịrị 235Mpa) na Q345B (S355Jr mkpụrụ ike karịrị 345Mpa). Maka ọkpụrụkpụ nke njedebe njedebe ọkachasị site na 2.5mm ruo 4.0mm ma ọ bụ soro ndị ahịa chọrọ. N'elu ọgwụgwọ na-ekpo ọkụ tinye kpaliri, na-eso AASHTO M232 na hà ọkọlọtọ dị ka AASHTO M111, EN1461 wdg ọnụ na e ...
A kọwara kọwaa ndị ahụ na ANSI B1.13M maka nnabata nke 6 g. Ihe mkpọchi kwekọrọ na ASTM F568M maka klas 4.6. Ihe maka corrosion na-eguzogide ọgwụ bolts na ASTM F 568M maka Klas 8.83. bolts. Ọgwụgwọ elu ga-eso AASHTO M232. Normaldị kwesịrị ekwesị maka washer bụ 76 * 44 * 4mm, anyị nwere ike ịgbaso eserese n'aka onye ahịa. Maka ngosiputa agba mgbe niile na-acha ọcha, ọbara ọbara, na odo, ị nwere ike ịgwakọta ha n'onwe gị. Ebumnuche na mkpụrụ osisi iji mee ka onye nche ahụ sie ike ...